Cross Media Optimization သို့ဝင်ရောက်ခြင်း Martech Zone
Cross Media Optimization သို့ဝင်ရောက်ခြင်း
စနေနေ့, ဧပြီ 11, 2009 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 9, 2012 Douglas Karr
မှာအတော်လေးအနည်းငယ်အစည်းအဝေးများရှိခဲ့သည် Webtrends Engage 2009 ညီလာခံ ထိုအချက်သည်အချက်အလက်ပေါင်းစည်းမှု၏စွမ်းအားနှင့်စီးပွားရေးရလဒ်များအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောဆိုခဲ့သည်။ များစွာသောကုမ္ပဏီများသည်ကြီးမားသော datamart ဒီဇိုင်းဖြင့်စတင်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြသည် - အရာအားလုံးကို၎င်းတို့၏ဒေတာမော်ဒယ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ကြိုးစားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်၎င်းသည်မှားယွင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်သင်အောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ။
Craig Macdonald, အကြီးတန်းဒုဥက္ကpresident္ဌနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ် Covario, Cross Marketing Optimization သို့ခြေလှမ်းဖို့ဘယ်လိုအပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုပြု၏။ အဆိုပါတင်ပြချက်နှင့် session ကိုခေါ်ခဲ့သည် CMO အသစ် - လက်ဝါးကပ်တိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း။ Craig သည်ချန်နယ်တစ်ခုစီနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းအသေးစိတ်မရှင်းပြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထပ်မံတင်ပြရန်ကြိုးစားမည်။
ဖြစ်စဉ်သည်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အစားအငယ်မှကြီးမားသည်။ သုံးစွဲသူအချက်အလက်များကိုလမ်းကြောင်းများ၊ စနစ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအစရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိဖောက်သည်အချက်အလက်များကိုအပိုင်းအစခွဲခြားထားသည်။ ဒေတာဒေတာထဲသို့ဖောက်သည်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်ဒေတာဘေ့စအကောင်အထည်ဖော်မှုသည်လွယ်ကူမြန်ဆန်ရန်လိုအပ်သည်။ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုစီသည် disc ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ discs တွေကိုတစ်ကျောရိုးသို့ပေါင်းစပ်နေကြသည်။ ကျောရိုးနေရာချပြီးသောအခါအရိုးများကိုထည့်နိုင်သည်။ အသားများသို့အရိုးများအဖြစ်ထည့်နိုင်သည်။ အသားများမှအရေပြားများဖြစ်သည်။
ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုစီအတွင်းရှိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။ ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခု၏ဥပမာတစ်ခုမှာသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရန်အလားအလာသည်အွန်လိုင်းမှပြုလုပ်သောအဆင့်များဖြစ်သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ချန်နယ်။ သူတို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုဖြင့်စတင်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ဆင်းလာလျှင်၊ ပစ္စည်းတစ်ခုအားစျေးဝယ်လှည်းသို့ထည့်ရန်၊ ထို့နောက်အမှာစာအကျဉ်းချုပ်၊ ပြောင်းလဲခြင်းစာမျက်နှာကိုနှိပ်ပါ။ မည်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ကိုနားလည်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
Browser၊ Operating System၊ IP Address စသဖြင့်?
ဤအချက်အလက်အားလုံးသည်သင်၏လမ်းကြောင်းအားအကဲဖြတ်ရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီ၏ထိရောက်ပြီးထိရောက်မှုမရှိသောအပိုင်းများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ၀ ယ်သူ၏ခရီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိမ်းယူနိုင်သည့် meta data အချက်အလက်တိုင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒေတာများအရပျ၌ရှိတခါ, ရုပ်သံလိုင်း၏ optimization မျှမျှတတရိုးရှင်းပါသည်။
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစီကိုသတ်မှတ်၊ သိမ်းဆည်းပြီးအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အချက်အလက်များဗဟိုမှဗဟိုချုပ်ကိုင်ခြင်းသည်နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ဒေတာများကိုဗဟိုမှချုပ်ကိုင်ထားခြင်းကကုမ္ပဏီတစ်ခုအားရုပ်သံလိုင်းများ၊ ၄ င်းတို့၏ထိရောက်မှုနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ၊ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုအားမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်စနစ်တကျအနိုင်ရပြီးဖြစ်သောသော့ချက်စာလုံးများကို pay-per-click အတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းဖြင့်သင်၏ကြိုးပမ်းမှုများကို cannibalizing? သင်၏ (စျေးသိပ်မကြီးသော) ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်လူများအားသင်၏ကုမ္မဏီသို့ (စျေးကြီးစွာ) ခေါ်ရန်တွန်းအားဖြစ်စေပါသလား။
အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချပြီးမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းများကိုပြန်လည်ရယူလိုလျှင် Cross-media optimization သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ (နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲခြင်း) ကြာနိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးသောအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အပိုင်းအစများရှိပါကဆုံးဖြတ်ချက်များအားယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Craig သည်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင်သိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးအမြတ်များရရှိစေရန်လိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုအလွန်အမင်းဖြတ်တောက်နေကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး / အိုင်တီကုန်ကျစရိတ်၏ ၁၀% သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အကောင်းဘက်သို့ဆက်စပ်သင့်သည်ဟုသူကယုံကြည်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ရဖို့အတွက်ဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုမထောက်ပံ့နိုင်ရင်အဲဒါဟာမျိုချဖို့ခက်ခဲတဲ့ဆေးပါ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသေချာဘူး။ ကြက်တစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်ကြက်ဥအခွံပဲ။ ၁၀% ကိုသင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားမျှတမှာလဲ။ သင် ၁၀% မသုံးစွဲပါကသင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
သင်လုပ်ငန်းစဉ်သို့ခြေလှမ်းအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့လမ်းလျှောက်သော့ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ချန်နယ်တစ်ခုတည်းကိုကောင်းမွန်စွာထားခြင်းကသင်၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်သည့်ပြန်လည်ပေးပို့မှုများကိုပေးလိမ့်မည်။
Tags: လက်ဝါးကပ်တိုင်ရုပ်သံလိုင်း optimizationစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်း
ဧပြီ 11, 2009 မှာ 10: 10 pm တွင်
ယုတ္တိရှိပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုစဉ်းစားရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်သဘောတူတယ် လက်ရှိစီးပွားရေး၌ဤကဲ့သို့သောပြaboutနာများကိုစျေးကွက်သမားများကမည်မျှစဉ်းစားနေကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ သူတို့ဖြစ်သင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်သူတို့ထင်သင့်တာကသူတို့ဟာဒီဟာကိုအာရုံစိုက်မထားဘူးဆိုတာပါပဲ။ အခြားစာဖတ်သူများအတွက်စစ်မှန်သော Cross-media optimization နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားအပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုရှိရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ကောင်းတဲ့ပို့စ်။
ဧပြီ 11, 2009 မှာ 11: 08 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခရစ်! သင်အားဖြင့်ရပ်တန့်တန်ဖိုးထားတယ်။ ငါသည်လည်းအခြားစျေးကွက်များထံမှကြားချင်ပါတယ်! ကွန်ဖရင့်၌ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်သတင်းစာကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်စွာအခြေပြုသည့်မီဒီယာများပင်ပါဝင်သည်။ အကောက်ခွန်နံပါတ် ၁-၈၀၀၊ အကောက်ခွန်လျှော့စျေးများ (သို့) သုံးစွဲသူများအားစိတ်ချယုံကြည်မှုကင်းမဲ့စွာဖြင့်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ရှေ့တွင် ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်ခြေရာခံရန်မည်သည့်အရာမဆိုမဟာဗျူဟာ၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။